Tantara « Henjan-droa »: hisokatra ny alahady izao ny taona teatraly 2021 | NewsMada
Tsy nisy ny taona teatraly tamin’ny taon-dasa. Ilay tantara saika hanokafana izany ihany no haroson’ny FMTM hanokatra ny “Taona teatraly 2021”.
Miezaka mampiaina hatrany ny teatra malagasy ireo mpisehatra. Fantatra fa hosokafana ny alahady 7 marsa izao ny “Taona teatraly 2021”, araka ny fanambarana avy amin’ny fikambanan’ny mpanao teatra malagasy na ny FMTM. Ilay tantara “Henjan-droa” no hovelomina indray etsy amin’ny Alliance française Andavamamba, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Tantara nosoratan’i Wast Ravelomoria izy ity, narindran-dRavaloson Haja sy i Noely Randriatsitohaina. Mpisehatra nofidina avy amin’ireo tropy mpikambana ao amin’ny FMTM kosa ny hampiaina izany.
Raha fintinina, mahakasika ny fifandonana eo amin’ny mpivady ny lohahevitry ny tantara “Henjan-droa”. Misy fizarana telo izany. Tsy matetika nolalaovina izy ity ka antony nisafidianana azy hanokafana ny taona teatraly izany. Tsiahivina koa fa tokony ho nanokatra ny “Taona teatraly 2020” izy io, saingy voatery najanona noho ny fisian’ny hamehana ara-pahasalamana tamin’ireny.
Mandra-piandry ny tohin’ny fandaharam-potoana, efa miatrika koa ny fanomanana ny andro eran-tany ho an’ny teatra, hankalazaina ny 27 marsa ho avy izao, ny FMTM. Sarotsarotra ny fanomanana ny fiakarana an-tsehatra ho azy ireo, indrindra noho ny tsy fisian’ny fotodrafitrasa afaka mandray ny teatra, saingy miezaka hatrany mampiaina ity seha-kanto ity ireo mpisehatra.